Guuleystayaasha Tartanka Gabayada Hoyga Maansada 2021 oo la shaaciyay | Dayniile.com
Home Warkii Guuleystayaasha Tartanka Gabayada Hoyga Maansada 2021 oo la shaaciyay
Waxaa maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay dadka ku guuleystay Tartanka Sanadlaha ee uu qabtay Hoyga Maansada Soomaaliyeed oo taageero ka helaya hay’adda Qaramada Middobay u Qaabilsan Horumarinta (UNDP).
Qeybta koowaad ee Gabyaaga ugu Wanaagsan Sanadka waxaa ku guuleystay Mursal Daahir Caynte oo gabaygiisu ku saabsanaa gobannimada iyo gumeysiga. Qeybta Gabadha ugu Gabayga Wanaagsan waxaa ku guuleystay Raxma Xuseen Huriye oo gabaygeeda kaga hadashay midnimada, dadkana uga digtay halista ka dhalan karta marki ay bulshadu ka tagto dhaqankeeda iyo qiyamkeeda. Abwaanka ugu Da’da Yar Sanadka waxaa ku guuleystay Mubaarik Yuusuf Dheeg oo gabaygiisu ku saabsanaa muhimadda ay leedahay xushmadda iyo naxariista.
Previous articleSaraakiisha Maraykanka oo aqoonsaday ninkii dadka dabbaaldagaya gaariga ku jiirsiiyey gobolka Wisconsin
Next articleMadaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas ku eedeeyay in uu taageero TPLF
War deg deg ah Oday iyo Caruur uu dhalay Oo Hoobiye...
Egypt’s business sector debt has dropped by 77% in 3 years